H1N1 | The World of Pinkgold
H1N1 is coming, Let’s prevent ourselves!
Posted on June 30, 2009 by cuttiepinkgold
မြန်မာပြည်မှာလည်း H1N1 ဆိုတဲ့ ကပ်ရောဂါ ရောက်ရှိလာပါပြီ။ တစ်ယောက်ကနေ အယောက် ၂၀၀ သို့တိုင်အောင် ကူးစက်နှုန်းပြင်းထန်တဲ့ ဒီရောဂါအတွက် ကျွန်မတို့တွေ တတ်နိုင်သလောက် ကြိုတင်ကာကွယ်တတ်ကြဖို့ လိုပါတယ်။ WHO က ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ အမေး/အဖြေကဏ္ဍတစ်ခုကို ကိုဂျွန်က ဘာသာပြန်ထားတာတွေ့လို့ ကျွန်မဘလာဂ့်မှာလည်း ပြန်လည်မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ မျှဝေခွင့် ပေးတဲ့ ကိုဂျွန်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
H1N1 ဗိုင်းရပ်စ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ဇွန်(၁၁)ရက်နေ့က WHOမှ ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ အမေးအဖြေ ကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ တတ်နိုင်ဆုံး ဘာသာပြန်ပေးထားပါတယ်။
H1N1 ကူးစက်မခံရအောင် ဘယ်လိုကာကွယ်နိုင်မလဲ ?
H1N1 ဗိုင်းရပ်စ်တုပ်ကွေးရောဂါ အဓိကကူးစက်ပြန့်နှံ့ပုံမှာ သာမန် ရာသီတုပ်ကွေးများကဲ့သို့ပင် ဖြစ်သည်။ စကားပြောခြင်း၊ နှာချေခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်းတို့မှ အလွယ်တကူ ကူးစက်နိုင်သည်။ ယေဘူယျအားဖြင့် တုပ်ကွေးဖြစ်နေသည်ဟု ထင်ရသူများနှင့် နီးနီးကပ်ကပ်နေခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်၍ ကူးစက်မခံရအောင် ကာကွယ်နိုင်သည်။ ဖြစ်နိုင်မည်ဆိုပါက တုပ်ကွေးဖြစ်နေသည်ဟု သံသယရှိသူများနှင့် ၁မီတာ(၃.၂၈ပေ)အကွာတွင် နေနိုင်ရန်ကြိုးစားပြီး အောက်ပါတို့ကို ဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။
ပါးစပ်နှင့် နှာခေါင်းကို လက်ဖြင့်ထိတွေ့ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ခြင်း။
လက်ကို ဆပ်ပြာသုံး၍ ရေဖြင့် စင်ကြယ်စွာဆေးကြောခြင်း (သို့မဟုတ်) အရက်ပျံပါသည့် လက်ဆေးရည်အသုံးပြုခြင်း။
ဖျားနာနေသည်ဟု ယူဆရသူများနှင့် နီးကပ်စွာနေထိုင်မှု မပြုခြင်း။
ဖြစ်နိုင်လျင် လူစုလူဝေးနေရာများအတွင်း နေထိုင်ချိန်ကိုလျှော့ချခြင်း။
မိမိနေထိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်တွင် လေဝင်လေထွက် ကောင်းမွန်စေရန် ပြူတင်းပေါက်များ ဖွင့်ထားခြင်း။
ကျန်းမာရေး အလေ့အထကောင်းများဖြစ်သည့် အိပ်ရေးဝဝ အိပ်စက်ခြင်း၊ အဟာရပြည့်ဝသည့် အစားအစာများ စားသောက်ခြင်းနှင့် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု ပြုလုပ်ခြင်း။
မျက်နှာဖုံး(Mask)သုံးခြင်းက…? WHOရဲ့ အကြံပြုချက်က…?
နေကောင်းလျင် မျက်နှာဖုံး(Mask) တပ်ဆင်ထားစရာ မလိုပါ။နေမကောင်းဖြစ်နေသူကို ပြုစုရသူဆိုပါက ထိုသူနှင့်အနီးကပ် နေထိုင်ရသည့်အခါတွင် မျက်နှာဖုံး(Mask) တပ်ဆင်ထားသင့်ပြီး ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုပြီးပါက မျက်နှာဖုံး(Mask)ကို ချက်ချင်းချွတ်ပစ်ကာ လက်နှစ်ဖက်ကို စင်ကြယ်စွာ ဆေးကြောရမည်။
နေမကောင်းဖြစ်နေစဉ် ခရီးသွားရသည့်အခါဖြစ်စေ၊ အနီးအနားတွင် အခြားသူများ ရှိနေသည့်အခါဖြစ်စေ မျက်နှာဖုံး(Mask)တပ်ဆင်၍ ပါးစပ်နှင့် နှာခေါင်းကို ဖုံးအုပ်ထားပါ။ မျက်နှာဖုံး(Mask)ကို မှန်ကန်စွာ တပ်ဆင်ရန်လိုအပ်သည်။
H1N1 ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံနေသည်ကို မည်သို့သိနိုင်မလဲ ?
ရာသီတုပ်ကွေးနှင့် A/H1N1 ဗိုင်းရပ်စ်တုပ်ကွေးတို့ကို ဆေးပညာ အကူအညီမပါပဲ မခွဲခြားနိုင်ပါ။
ကိုယ်ပူခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ကိုယ်လက်ကိုက်ခဲခြင်း၊ လည်ချောင်းနာခြင်းနှင့် နှာရည်ကျခြင်း လက္ခဏာများမှာ တုပ်ကွေးနှစ်မျိုးစလုံးတွင် အတူတူပင်ဖြစ်သည်။
သက်ဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများသာလျှင် H1N1 ဗိုင်းရပ်စ်တုပ်ကွေး ဟုတ် မဟုတ် အတည်ပြုနိုင်မည်။
ဖျားနာနေပြီဟုယူဆလျင် ဘာလုပ်သင့်သလဲ ?
နေထိုင်မကောင်းဖြစ်ကာ ကိုယ်ပူ၊ ချောင်းဆိုး၊ လည်ချောင်းနာနေပါက
ကျောင်း၊ အလုပ်မသွားပဲ လူစုလူဝေးမှ ရှောင်ကြဉ်ကာ အိမ်မှာနေပါ။
ချောင်းဆိုး၊ နှာချေပါက ပါးစပ်နှင့် နှာခေါင်းကို ဖုံးအုပ်ပါ၊ တစ်ရှုးစက္ကူသုံးပါက သေချာစွာစွန့်ပစ်ပါ၊ ပြီးလျင် လက်ကို ဆပ်ပြာသုံး၍ ရေဖြင့် စင်ကြယ်စွာဆေးကြောပါ (သို့မဟုတ်) အရက်ပျံပါသည့် လက်ဆေးရည်ဖြင့် ဆေးကြောပါ။
ချောင်းဆိုး၊ နှာချေသည့်အခါ ပါးစပ်နှင့် နှာခေါင်းကို ဖုံးအုပ်စရာ အနီးအနားတွင် မရှိပါက ပါးစပ်နှင့် နှာခေါင်းကို လက်မောင်းဖြင့်အပ်ပြီး တတ်နိုင်သမျှ ဖုံးအုပ်ပါ။
လူအများရှိရာသို့သွားလျင် မျက်နှာဖုံး(Mask) မှန်ကန်စွာ တပ်ဆင်အသုံးပြုပါ။
မိသားစုနှင့် မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများကို မိမိဖျားနာနေကြောင်း အသိပေးပြီး အခြားသူများနှင့် တွေ့ဆုံခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါ။
နားလည်တတ်ကျွမ်းသည့် ဆရာဝန်နှင့် ဆက်သွယ်တိုင်ပင်ကာ ဆေးစစ်ကုသမှု ခံယူပါ။
အကယ်၍ တုပ်ကွေးဖြစ်ခဲ့လျင် ပဋိဇီဝဆေးသောက်သင့်ပါသလား ?
ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့် ဆေးများကိုသာ သောက်သင့်သည်။ မိမိဘာသာ ဆေးဝယ်သောက်ခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။
တုပ်ကွေးဖြစ်သည့် မိခင်များ ကလေးနို့တိုက်နိုင်ပါသလား ?
ဆရာဝန် ညွှန်ကြားမှသာ ကလေးနို့တိုက်ခြင်းကို ရပ်ပါ။ ထိုသို့မဟုတ်ပါက ကလေးကို နို့တိုက်နိုင်ပါသည်။ မိခင်နို့တိုက်ခြင်းဖြင့် ကလေး၏ ကိုယ်ခံစွမ်းအား တိုးတက်စေပါမည်။
မည်သည့်အချိန်တွင် ဆေးကုသမှု ခံယူသင့်ပြီလဲ ?
သုံးရက်ဆက်တိုက် ကိုယ်ပူချိန်တက်နေပြီး အသက်ရူရ ခက်ခဲလာခြင်း၊ ကလေးငယ်များအနေဖြင့် ကိုယ်ပူမကျပဲ အသက်ရူနှုန်းမြန်ခြင်းတို့ ဖြစ်လာပါက နီးစပ်ရာ ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းသို့ သွားသင့်သည်။
အိမ်မှာဆိုလျင်လည်း အရည်များများသောက်၍ အနားယူကာ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး သောက်ပါ။ အိပ်ရေးဝဝ အိပ်ခြင်းဖြင့်လည်း အများစုမှာ ပြန်လည်သက်သာလာနိုင်သည်။ ကလေးငယ်များအတွက် Aspirin မပါဝင်သော အကိုက်အခဲ ပျောက်ဆေးများ တိုက်နိုင်ပါသည်။
တုပ်ကွေးဖြစ်သော်လည်း သက်သောင့်သက်သာ ရှိနေပါက လုပ်ငန်းခွင်သို့ သွားသင့်ပါသလား ?
မသွားသင့်ပါ။ တုပ်ကွေးဖြစ်ပြီဆိုပါက ရောဂါလက္ခဏာ မပျောက်မချင်း လုပ်ငန်းခွင်သို့ မသွားပဲ အိမ်မှာသာ နားနေသင့်သည်။
နေထိုင်မကောင်းဖြစ်နေပြီး တုပ်ကွေးလက္ခဏာများ ခံစားနေရပါက ခရီးမသွားသင့်ပါ။ မိမိဘာသာ တုပ်ကွေးဖြစ်နေပြီဟု သံသယရှိလျင် နားလည်တတ်ကျွမ်းသည့် ဆရာဝန်နှင့် တွေ့ဆုံပြီး ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးသင့်သည်။
Filed under H1N1 |	8 Comments